दुर्घटनाले गाउँ नै रित्तियो, शोकाकुल गुल्मिको कार्की गाउँ , छोरीहरु क्रिया बस्दै ! – ईमेची डटकम
दुर्घटनाले गाउँ नै रित्तियो, शोकाकुल गुल्मिको कार्की गाउँ , छोरीहरु क्रिया बस्दै !
Posted byइमेची संवाददाता December 6, 2019 December 11, 2019 Leaveacomment on दुर्घटनाले गाउँ नै रित्तियो, शोकाकुल गुल्मिको कार्की गाउँ , छोरीहरु क्रिया बस्दै !
टोपलाल अर्याल ,गुल्मी ।
उमा कार्कीका आँखा ओभाएका छैन् । मंलबार घरमुलीसहित तीन जना दुर्घटनामा परे । कुल पुजाका लागि बाग्लुङ्ग निसीखोला हिडेका श्रीमान धन बहादुर कार्कीको शव बुधबार मात्रै फेला पर्‍यो । दुर्घटना स्थलमा बुहारी सुचना कार्की मृत थिइन् । घाइते अवस्थामा फेला परेका नाति चार बर्षीय हिमाल कार्की काठमाण्डौमा उपचारत छन् ।सोहि गाउँका तिल बहादुर कार्कीले दुर्घटनाको अघिल्लो रात सम्झिएर आँखामा आँसु भरे । त्यो दिन उनले श्रीमति भुमि कार्कीलाई नजान आग्रह गरेका थिए ।
दुर्घटनामा परेको जीप ।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुको नामावली ।